Investment yemamiriyoni zana nemakumi masere nemana emamiriyoni eiri mumutsara wechipiri wekugadzira muLipetsk
LWM RUS, inotungamira inogadzira zvigadzirwa zvechando zvembatatisi muRussia, yakasaina chibvumirano chekudyara nagavhuna wedunhu reLipetsk Igor Artamonov, kukapetwa zvakapetwa huwandu hweanogadzira chirimwa chayo chiripo muSpecial Economic Zone yeLipetsk.
Mari yekudyara ichave inodarika mabhiriyoni gumi nematanhatu ema ruble (mamirioni zana nemakumi masere nemashanu) uye inogadzira mamwe mabasa mazana maviri nemakumi mashanu mudunhu iri. "Idzi inhau dzakanaka dzedunhu reLipetsk sezvo dzichizoumba mabasa nekutsigira kuvandudzwa kwevarimi vemunharaunda nenharaunda yese", Igor Artamonov akataura.
Mutsara mutsva uchanyanya kutariswa kushandira misika iri kukura yeRussia neCIS. Mbatatisi dzese dzinozotorwa kubva kuvarimi vemuno nerutsigiro rizere kubva kukambani. Marc Schroeder, CEO weGwayana Weston Meijer, anova ndiye mugovani mukuru weLWM RUS, akati: “Musika weFrance-fry uri kukura pasi rose uye Russia musika wakakosha kwazvo kwatiri. Kuisa mari kwekugadzirwa kwenyika kunoratidza kuzvipira kwedu kune vatengi vedu uye nekutsigira zvirongwa zvavo zvekukura mune ramangwana ”.
Kuvakwa kwechirimwa kuchatanga mukati memavhiki mashoma uye kunotarisirwa kunge kuchishanda kutanga kwa2023.
Dzimwe nhau nezve POTATO KUITA
Sarudza iyo Right Fungicide Kuchengetedza Yako Mbatatisi
Weuthen kuraira: ikozvino ipa mbatatisi yemahara yekumwe kugadzirisa
Chiitiko pasi rese